musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » New Luxury: Iyo Tasman Inozivisa Australia Debut
Iyo Luxury Collection, chikamu cheMarriott Bonvoy's portfolio yemakumi matatu anoshamisa mhando, inozivisa iyo yekuAustralia debut yeThe Luxury Collection brand nekuvhurwa kuri kuuya kweThe Tasman, Luxury Collection Hotel, Hobart musi wa30 Zvita 9.
Kuvhurwa kwacho kuchakoka vafambi nevaongorori kuHobart pane chiitiko chekushandura chakafemerwa neyakasiyana tsika yenzvimbo yechitsuwa cheAustralia. Iri munzvimbo yenhoroondo yeHobart, Iyo Tasman ichave iri paSalamanca Nzvimbo ine inoyevedza pamberi paMurray Street, nhanho chete kubva kune yakakurumbira Salamanca Markets, St David's Park uye inoyevedza yemvura pamberi peSullivan's Cove. Kusvika kunotarisirwa zvikuru kwehotera kunovimbisa kuunza hupfumi hwenzvimbo yeguta muhupenyu, kubatanidza kutanga kweguta kune tsika yemazuva ano inokwezva.
Ichipa yakasarudzika yekuvaka chiitiko inosanganisa saiti yenhoroondo nhaka nechiono chinoshamisa chemazuva ano, vashanyi veThe Tasman vanozove nemukana usingawanike wekuona matatu akasiyana edhizaini mukati mehotera ine makamuri zana nemakumi mashanu akaunzwa pamwe nevavakahwina mubairo vekuAustralia FJMT uye zvemukati. naJoseph Pang Design. Iko kuungana kwezvivakwa zvinoumba The Tasman kunosanganisira yekutanga 152s Heritage Building, iyo Art Deco Building inodzokera kuma1840s, uye yazvino, girazi rakavharirwa Pavilion Building.
Makamuri evaenzi uye masutu akagadzirirwa kuratidza rondedzero yakapfuma yezvivakwa zveimba yacho uye inoratidzira ruzivo runoratidza nguva yega yega yekugadzira mune isina musono, yakaturikidzana chiitiko. Kubva pane zvakadzoreredzwa zvakadzoreredzwa zvenhaka senge musungwa-akachekwa ejecha madziro uye nhaka yekugara gasi nzvimbo dzemoto, kune yekuzvarwa Tasmanian Sassafras matanda edhizaini ruzivo, imwe neimwe yemakamuri evaenzi uye masutu anobatanidza tsika yeHobart apo yakatarisana nepanoramic guta maonero.
Ihotera iyi ichange iine pfungwa nhatu dzakasiyana dzekudyira, kusanganisira yekusaina yekudyira, Peppina, yakagadzirwa nemukurumbira Tasmanian Chef Massimo Mele. Cocktail bar neraibhurari yemidzimu, Mary Mary, ichapa iyo yekare-yenyika bar chiitiko chakafungidzirwazve chenguva dzazvino. Deco Lounge inopa yakanatswa nzvimbo yekunakidzira siginecha Yepamusoro Tea chiitiko munzvimbo yekugara iyo inodururuka ichipinda mutara yakatarisana neParamende Square.
Vaenzi vanozosimbiswa kuti vawane zviitiko zveepikureya zvinopihwa neTasmania, vachiwana nyaya dziri kumashure kwechigadzirwa chayo chine mukurumbira uye kuongorora renje risingazivikanwe rechitsuwa chiri mhiri. A Clefs d'Or concierge acharatidzira ega kushanya kwevagadziri pachitsuwa ichi, paine nguva dze epikurean dzekuva neruzivo mukati mehotera, kusanganisira kuravira kweapuro brandy, imba yakachembera mumadhiramu achangobva kubatanidzwa akagadzirwa-ku-odha, inotambirwa munzvimbo dzinonakidza dzenhoroondo yekuve. yakawanikwa kuThe Tasman.